IDiploma-Ingcali yemiSebenzi yoMhlaba-iGeofumadas
Ikhaya/IiDiploma zeAulaGEO/IDiploma-Ingcali yoMsebenzi woMhlaba
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwicandelo lokuziva kude, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Kwangokunjalo, abo banqwenela ukongeza ulwazi lwabo, kuba bayinxalenye yesoftware kwaye banqwenela ukufunda ukulungelelanisa ulwazi lwendawo kunye neminye imijikelezo yokufumana, ukuhlalutya kunye nokunikezelwa kweziphumo kolunye uqeqesho.
Ukudala amandla okufumana, ukuhlalutya kunye nokubonelela ngolwazi lomhlaba. Le khosi ibandakanya ukufundwa kwe-HEC-RAS, enye yeenkqubo ezisetyenziswa kakhulu kwicandelo lohlalutyo lwamanzi; Kunye nokusetyenziswa kwezixhobo apho idatha yeCAD / GIS inxibelelana nakwezinye iinkalo ezinje ngeGoogle Earth kunye ne-AutoDesk Recap. Ukongeza, ibandakanya imodyuli esebenzayo / yokuqonda ukuqonda lonke umjikelo wolawulo lolwazi ukusuka kwiisenzi ezikude.
Izifundo zinokuthathwa ngokuzimeleyo, ukufumana idiploma kwikhosi nganye kodwa "IDiploma Ingcali yemisebenzi yoMhlaba” ikhutshwa kuphela xa umsebenzisi ethathe zonke iikhosi kuhambo.
Izibonelelo zokufaka isicelo kumaxabiso eDiploma- Ingcali yoMsebenzi woMhlaba
Iimvakalelo ezikude …………………… .. i-USD 130.00 24.99
Google Earth ……………………………… i-USD 130.00 24.99
Uhlalutyo lwamanzi I-HEC-RAS 1 ……… ye-USD 130.00 24.99
Ukuphinda Ummeli ………………………. iUSD 130.00 24.99
Uhlalutyo lweHydric HEC-RAS 2 ………. iUSD 130.00 24.99
IBlender-Imodeli yeSixeko… ..USD 130.00 24.99
Geomoments-Iemvakalelo kunye nendawo kwi-app enye